Logo 5 mbola voatahiry amin'ny fanovana - Creativos Online | Famoronana an-tserasera
Jose Angel | | Logos, dia midika hoe
Azontsika atao ny mahita fa tamin'ity taona 2018 ity ary ny fihenan'ny 2017 vao haingana dia nisy fiovana teo amin'ny logo avy amina marika marobe. Ity sary ity dia misy ifandraisany amin'ny haino aman-jery vaovao izay iharan'izy ireo. Fa koa, mba hanomezana loko ireo fomba fiasa vaovao eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny, izay toa tototry ny tandindona be loatra.
Izany no antony nanamora ny fampivoarana ny sary na eo aza ny fitaovana misy hahasalama azy. Ny tsy manam-petra ny loko sy ny endrika, amin'ny farany sisa tavela minimalist. Na dia tsy mbola nisy aza ny marika sasany naneho hevitra momba io fanovana io, na satria ny sary famantarana ataon'izy ireo dia manohy maneho ny maoderina na satria tsy nahita mpisolo toerana izy ireo. Na izany aza, heveriko fa tsy misy amin'izy ireo maniry fanovana ao amin'izy ireo
4 Mcdonalds dia miditra ihany koa
5 Ny marika Shell
Ny marika fialamboly olon-dehibe quintessential, teraka tany Chicago. Lova nolovaina tamin'ny andro nanoratana ny logo sy ny fifaliana, Bitro Playboy dia naka antsasak'adiny hisarihana tamin'ny 1953, hoy i Art Paul, talen'ny zava-kanton'ny magazine tamin'io fotoana io.
Playboy fahazoan-dàlana amin'ny sary famantarana azy, manomboka amin'ny akanjo sy ny vokatra hatsaran-tarehy hatramin'ny bara sy klioba, izao dia iray amin'ireo loharanom-bolany lehibe. Ary na dia efa mandeha aza ny tsaho milaza fa mihidy ny gazety satria efa maty i Hugh Hefner tamin'ny 2014, Playboy dia nitana ny laharana faha-42 tamin'ny lisitr'ireo 150 voalohany mpanome lisansa manerantany. Tsy ratsy amin'ny sary famantarana haingana sy mora.
Talohan'izay dia toa tsy manan-tsiny ny logo. Fanekena tsotra ilay vokatra no hamidinao. Androany, tsy olona irery intsony no manao izany, ary tsy mitady hanao an-tsakany sy andavany azy. Androany ny studio famoronana dia raisina hanadihady ny tsena ary ny vokatra avy amin'ny orinasa, fandalinana lehibe momba ny marketing sy ny endrika hanakaiky kokoa ny logo mahomby. Ireo dingana ireo dia lafo ary mitaky fotoana be dia be.
Raha ny an'i Nike dia kely dia kely ny fotoana ary ny vidiny, ny vola mampihomehy 35 dolara ho an'ny mpianatra Portland. Ary milaza aho fa mampihomehy, satria ny logo iray ora roa dia toa lojika fa tsy vola be tsy maintsy aloa amin'ny sary iray, fa mahita ny fiantraikan'ny marika, dia mahagaga raha milaza ny kely indrindra.
Eny, marina izany, nisy fiovana lehibe nipoitra hatramin'ny namoronana an'i Coca-Cola, koa noho ny fiovana lehibe nataon'izy ireo tamin'ny singa ao anatiny. Ary io dia niova ny sary tamin'izany fotoana izany rehefa tsy maintsy nesoriny ny kôkainina ho toy ny singa iray amin'ny marika. Saingy taorian'ny nananganana ny logo ankehitriny tamin'ny taona 1886, dia mbola tsy nahita fiovana lehibe na fahasamihafana miavaka.. Fanamboarana kely vitsivitsy izay tsy manafoana ny sary famantarana mampiavaka ny marika izay manana solontena lehibe indrindra amin'ny firenena rehetra afa-tsy i Kiobà sy i Korea Avaratra.
Mcdonalds dia miditra ihany koa
Ny orinasan-tsakafo haingana quintessential toa hatraiza hatraiza. Heveriko fa tsy kisendrasendra koa izany. Fa io dia hatramin'ny nananganana azy tamin'ny taona 60 sy misy trano fisakafoanana mihoatra ny 36.000 miparitaka amin'ny firenena 120 tsy mbola nisy fiovana teo amin'ny sariny. Ilay M 'Ma' mavo satria tsipìka roa miloko mena no mijanona nanomboka teo ary izany no antony rehefa hitantsika fa mitambatra loko io dia tonga ao an-tsaina ilay marika. Tsy misy marika. Fantatra amin'ny sarivongan'ny fahalalahana izy io, nanjary marika famantarana ny sakafo haingana izy ireo, na eo aza ny fifaninanana ataon'izy ireo.
Ny marika Shell
Marika izay angamba tsy dia fantatra loatra raha vao jerena manerana an'izao tontolo izao. Tsy misy fiatraikany mitovy amin'ireo marika sakafo haingana na Sneakers napetrakay tamin'ny tongotray isa-maraina. Fa ny maha-zava-dehibe azy dia mitovy na miankina amin'ny olona angatahinao lehibe kokoa na kely kokoa. Shell dia natsangana tamin'ny 1897 ary fito taona taorian'ny namoronana azy dia nahazo ny mari-pamantarana ankehitriny ny marika fa zavatra sarotra kokoa. Tamin'ny 1971 dia nanatsotra ny singa rehetra izy ireo 'sisa'. Rehefa afaka izany fotoana rehetra izany, ny sary dia manana fanekena tsara amin'ny maso mitanjaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Logo 5 izay mbola afa-maina amin'ny fanovana